» भाइरल चिया वाली ( सृष्टि तमाङ) को घरबेटी यति महान रहेछन, लाखौं रुपैयाँ घरभाडा मिनाहा गरिदिए ! (हेर्नुहोस भिडियो सहित) भाइरल चिया वाली ( सृष्टि तमाङ) को घरबेटी यति महान रहेछन, लाखौं रुपैयाँ घरभाडा मिनाहा गरिदिए ! (हेर्नुहोस भिडियो सहित) – हाम्रो खबर
भाइरल चिया वाली ( सृष्टि तमाङ) को घरबेटी यति महान रहेछन, लाखौं रुपैयाँ घरभाडा मिनाहा गरिदिए ! (हेर्नुहोस भिडियो सहित)
चियावालीका नाममा अहिले सामा’जिक सञ्जालमा चर्चामा रहकी श्रृष्टि तामा’गंको घरभेटी निकै सहयोगी रहेछन् । श्रीमानले अलपत्र पारेपछि दुई वर्षकी छोरी काखमा बोकेर उनी रातभरी का’ममा खटिन्थिन् । दुई वर्षकी छोरी पिठ्युमा बोकेर राती ३ वजे उठेर काममा लागेको भिडियो सार्व’जनिक भएपछि उनी चर्चित भएकी हुन् । उका श्रीमानको बारेमा भने अर्को ठूलो रहस्य खुलेको छ । उनले इराक पठाइदिन्छु भन्दै गाउँका धेरैलाई समस्यामा पारेका कार’ण अहिले सम्पर्क विहिन भएको थाहा भएको हो ।